Lionel Messi waa Boqorka goolasha Labaaleyda ah – Gool FM
Byare March 21, 2017
(Catalonia) 21 Mar 2017. Lionel Messi waa macallina goolasha loo dhaliyo labo labada kaddib labadii gool uu ka dhaliyay Valencia kulankii ay dhawaan ka adkaadeen horyaalka La Liga.
Xiddiga reer Argentina ayaa Barca u dhaliyay goolashiisii 100-aad waa marka laga hadlayo goolasha uu labo labada u dhaliyo.
Seville waa dhibanaha Messi oo waa kooxda uu ka dhaliyay goolasha ugu badan ee labo labada ah oo lix jeer ay iska hor yimaadeen wuxuu ka dhaliyay min labo gool, halka Atletico Madrid uu afar kulan ka dhaliyay min labo gool.
Tartanka uu ka dhaliyay goolasha ugu badan ee labo labada ah aya ah La Liga 70-gool, Champions League 19, sideed gool Copa De Rey iyo min hal jeer tartamada UEFA Super Cup, Supercopa de Espana iyo Club World Cup.
Mesut Ozil oo seegaya kulanka saaxiibtinnimo ee xulkiisa Germany la ciyaarayo England... (Waa kuwee xiddigaha kale ee maqan?)